Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Southwest na-ekwupụta mgbanwe ọchịchị ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
A kwalitere Justin Jones ka ọ bụrụ Senior Vice President Operational Strategy & Design, ebe ọ ga-eduga n'ịkwalite ụlọ ọrụ ụgbọ elu na nkwalite arụmọrụ n'ọrụ a emepụtara ọhụrụ.
Southwest Airlines Co. taa kwuputara mgbanwe ndu na nhọpụta n'ime ngalaba dị iche iche nke Ụlọ ọrụ ahụ.
A kwalitere Justin Jones ka ọ bụrụ Senior Vice President Operational Strategy & Design, ebe ọ ga-eduga n'ịkwalite ụlọ ọrụ ụgbọ elu na nkwalite arụmọrụ n'ọrụ a emepụtara ọhụrụ. Jones jere ozi na mbụ dị ka onye isi oche Nkà na ụzụ Nkà na ụzụ Planning na Performance, ebe ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ nkwekọrịta, atụmatụ nlekọta dị arọ, ntụkwasị obi na ihe ndekọ, ọzụzụ, ọgụgụ isi azụmahịa, ọdịdị ụgbọ elu, na atụmatụ atụmatụ maka ọrụ nka. Jones ejirila ọrụ dị iche iche na atụmatụ atụmatụ dị iche iche na ụlọ ọrụ ahụ wee malite na Southwest na 2001 dị ka onye nyocha ego ego na ọnụahịa.
Site na mgbanwe a, Angela Marano, ugbu a na-elekọta onye isi mgbanwe azụmahịa, na-akwalite na osote onye isi oche azụmahịa mgbanwe, ya na ndị otu ya ga-esi na Ngalaba Ego gaa na Strategy & Design Team ọhụrụ. Ndị otu mgbanwe azụmaahịa na-enye ọrụ na ike dị iche iche, gụnyere Innovation / Human-Centered Design, Na-aga n'ihu Mmelite, Emerging Trends, Data Science, na Automation. Marano nọ na Soutwest ụgbọ elu maka afọ 23, malite na 1998 na Teknụzụ ma nwee ọtụtụ ọrụ ndu na teknụzụ na atụmatụ ụlọ ọrụ.
A kwalitere Jonathan Clarkson n'oge na-adịbeghị anya ka ọ bụrụ osote onye isi ahịa ahịa, iguzosi ike n'ihe na ngwaahịa. Clarkson bụ onye na nso nso a onye isi njikwa, na-ahụ maka ọrụ njikwa izugbe maka mmemme nturu ugo ụlọ ọrụ na-emeri ugboro ugboro, Rewards Rapid, yana mmekorita anyị. O nwekwara ibu ọrụ maka njikwa azụmaahịa nke ngwaahịa enyemaka ego Southwest (EarlyBird Check-In, Upgraded Boarding, Hotels, Cars, wdg) ma na-eduga Ọrụ Azụmahịa/Sayensị Sayensị na Nhụta Ndị Ahịa/Nlebanya & Optimization Team na Marketing.
Jim Dayton na-atụgharị gaa na osote onye isi ala Cybersecurity na onye isi nchekwa ozi, na-esote onye isi njikwa nke onye isi nchekwa nchekwa ozi Michael Simmons pụọ na ụlọ ọrụ ahụ. Na ọrụ ọhụrụ nke Dayton, ọ ga-ahụ maka akụkụ niile nke cybersecurity n'ofe Southwest Airlines' akụrụngwa, ọdụ ụgbọ elu, na ụgbọ elu. Dayton sonyeere Southwest na 2012 wee jide ọtụtụ ọkwa ọkwa ọkwa isi. N'ime ọrụ ya kacha nso nso a, o nwere ibu ọrụ iduzi Pọtụfoliyo Operations n'ime Ngalaba Teknụzụ Southwest wee rụọ ọrụ n'akụkụ Ọrụ ụgbọ elu, Ọrụ Inflight, Njikwa Ọrụ Network, yana Safety & Nche iji mee ka ọtụtụ sistemụ arụmọrụ Southwest dị oke egwu.
A kwalitekwara John Herlihy site n'aka onye isi nchịkwa gaa na osote onye isi oche teknụzụ arụmọrụ na ntinye ntinye ụlọ ọrụ. Herlihy ga-elekọta Pọtụfoliyo Nka na ụzụ na-akwado ngwa mmezi ụgbọ elu Southwest na gburugburu ngwaahịa. Na mgbakwunye, ọ ga-edu ndị otu ụlọ ọrụ nrụpụta ọhụrụ hibere, bụ nke lekwasịrị anya na nnyefe nke nkwalite nchekwa cyber zuru oke na ngalaba yana nzuzo data. Ọ sonyeere Southwest na 2017 wee lelee ọtụtụ mmejuputa ngwaahịa ngwaahịa n'ime Ngalaba Ọrụ Nka na ụzụ.